Iyacabeka eyokukhulisa umnotho wendawo eMsunduzi – Msunduzi News
Iyacabeka eyokukhulisa umnotho wendawo eMsunduzi
KUKHONA ukuvumelana ngeqhaza lamabhizini asakhasayo emnothweni wezwe. Khona lapho uMasipala uMsunduzi udaba lokuthuthukisa lo mkhakha ulubeke eqhulwini njengeqhingasu ekuthuthukiseni umnotho wendawo. Lokhu kube sobala ngesikhathi lo Masipala oholwa yiMeya uThemba Njilo wamukela uNgqongqoshe woMnyango Obhekele Amabhizinisi Asakhasa, uMhlonishwa uLindiwe Zulu. UMhlonishwa obengahambi yedwa njengoba bekukhona uSekela Ngqongqoshe wakwaTrade and Industry, uMhlonishwa uBulelani Magwanishe, uSekela Ngqongqoshe wakwaEconomic Development, uMhlonishwa uMadala Sisuku, uSekela Ngqongqoshe wakwaSmall Development, uMhlonishwa uCassel Mathale, uSekela Ngqongqoshe wakwa- Environmental Affairs, uMhlonishwa uBarbara Thompson. Omunye owayekhona nguMhlonishwa uRuth Bhengu onguSihlalo weKomiti lePhalamende elelusa ukusebenza koMnyango Obhekelele Osomabhizinisi Abasakhasa.
“Sibonge kakhulu singuMnyango sihamba neminyango eyahlukahlukene ukuthi sibe seMsunduzi ngenhloso yokweseka imifelandawonye engama-30 ekhona kule ndawo. Sibonga ukuthi lo msebenzi okukudala utotoba kungabi nanqubekela phambili kuyona esekuphele iminyaka emine ugcine usukumile. Kudala abanikazi bayo bayisungula bebizwa ngeKings of Midlands,” kusho uMhlonishwa uZulu.
Enkulumweni yakhe uZulu uvumile ukuthi kuke kwanamathizethize nabebangwa phakathi kokunye ngasohlangothini lukaHulumeni ukungaqondi ukusebenza kwemboni yamatekisi. Uphinde waphawula nobumqoka bokubambisana kweminyango kuzwelonke kanye noHulumeni Bendawo.
“Silapha eMsunduzi ngoba sifisa ukukhombisa umphakathi ukuthi uma uHulumeni Kazwelonke ebambisene noHulumeni Wendawo izidingo zingafinyelela kalula kubantu. Inhloso ngqangi yalolu hlelo ngukuthuthukisa umnotho waboHlanga, sakhe umcebo. Sizobuya ngoNdasa ngenhloso yokuzokwelusa ukuthi ngabe lokhu esizokubheka kule ndawo kuyenzeka yini,” kusho uMhlonishwa uZulu.
Ephawula ngomklamo asebewuhlakulile uMnu uNkosinathi Nkomo onguSihlalo weKings of Midlands nobuye abe nguSekela sihlalo weSANTACO uveze ukuthi baqala ngonyaka we-1994 ngesikhathi bethula iqhingasu lokuvula isikhwama lapho bezothengelana khona amatekisi, bangathathi imali bayoyipha abezizwe. Ngezifiso abanazo ukuya phambili uNkomo uthe: “Kuyisifiso sethu ukuba sibe nendawo yethu yokwetha uphethiloli kanye nendawo edayisa amasondo kanye nesitolo sokudayisa izitho zezimoto (spares shop). Sinesiqiniseko sokuthi ngeke simphoxe uHulumeni, ngoba sifisa nakwezinye izindawo bathole isibonelo futhi bathathisele kithi. Sihlose ukuba yisibonelo esihle hhayi emphakathini waseMsunduzi kuphela kepha nasemphakathini waseNingizimu Afrika,” kusho uNkomo.
Ngalolu suku injabulo ibibhalwe ebusweni kuNjilo njengoba obekwenzeka akuhumushe ngokuthi kuqhubezela phambili iphupho likaMasipala nxa kukhulunywa ngokuthuthukiswa komnotho wendawo: “Okwenzeka lapha kuseka lokhu esesikuqalile njengoMasipala. Futhi uma sehlulekile ukuthi sisebenzise leli thuba esinikwa lona kuyobe sizigwaza ngowethu. Okwenziwe ngosomatekisi kusivezela okukhulu esingakwenza sibambisene ngoba imizamo yokutakula abantu bakithi obhukwini lobubha ingumsebenzi wethu sonke, akuwona okaHulumeni kuphela,” kusho uNjilo ebigcagcele esokeni kuye.
Isikhulu soMnyango iSustainable Development and City Entities kuMasipala, uNkk u-Ursula Ntsubane wenabe ngezinhlelo zokulekelela abasakhasayo wagxila kuKings of Midlands; “Njengoba le nhlangano iKings of Midlands isinxusile ukuthi siyilekelele ngendawo yokusebenza, singu Msunduzi sesisezinhlelweni zokuthi bathole umhlaba lapho bezosebenzela khona, ukuze bakwazi ukusabalala kulokhu abakwenzayo. Kuyangijabulisa ukubona inhlangano esinesikhathi eside kangaka ngoba izinhlangano aziyiqedi iminyaka emibili. Ngoba bayahluleka ngukwazi nokuthola uqeqesho lokuthi izinhlangano zisebenza kanjani. Kungumsebenzi wethu ukuthi izakhamuzi zase Msunduzi ziqeqesheke ukuthi izinhlangano zisebenza kanjani. Sijabula kakhulu ukuthi namhlanje sisebenzisana noHulumeni kuzwelonke ekuqinisekiseni ukuthi izidingo ziyafinyelela kubantu,” kuphetha yena.
Isifiso sabafundi sokubuyisela okuhle eMsunduzi
UMsunduzi nethuba lesiqalo esisha sezakhamuzi
Eyokuba uSomlomo isho ukuncelisa amawele
Previous post: IMeya ithi izingane zabafana azingashiywa ngemuva
Next post: Izisebenzi nelima lokuhlanza idolobha